झापा र कास्कीमा बन्ने भयो सुँगुर र बंगुरको औद्योगीक पार्क ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > झापा र कास्कीमा बन्ने भयो सुँगुर र बंगुरको औद्योगीक पार्क !
काठमाडौ । नेपालमा अब सुँगुर र बंगुरको पनि पार्क निर्माण हुने भएको छ । पशुपंछी मन्त्रालयले झापा र कास्की जिल्लामा सुँगुर र बंगुरसम्बन्धी पार्क निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सरकारी निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ती दुई जिल्लामा पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले बंगुरको स्वच्छ र स्वस्थ्य मासु उत्पादन गरी स्वदेशको माग पूरा गरी निर्यात गर्न पार्क निर्माण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
उद्योगको औद्योगिक क्षेत्रजस्तै सुँगुर र बंगुरको औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । पार्क निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुईवटा पार्क निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । पौडेलले भने , ‘अन्य उद्योगको औद्योगिक क्षेत्रको मोडेलजस्तै बंगुरपालन र मासु प्रशोधन गर्ने गरी बंगुरपार्क स्थापना गर्न कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेको छ ।’
यस्तो पार्कमा किसान व्यावसायिक र एकीकृत रूपमा बंगुरसम्बन्धी काम गर्न पाउनेछ । ‘फोहोर खानेकुरा खुवाउने र फोहोरमै राखेर पाल्ने प्रवृतिका कारण नेपालमा बंगुरपालन र बंगुरको मासु उपभोग गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइँदैन’, अधिकारीले भने,’स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त बंगुरको मासु उत्पादन गरी स्वदेशको माग पूरा गरी विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख १९
२०७४ वैशाख १९ गते १४:०० मा प्रकाशित
पूर्व मन्त्री महेस बस्नेतका पिता सत्तरी वर्षमा चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण
लोकसेवा आयोगले फेरि निकाल्यो यस्तो सूचना
वृहत् शैक्षिक मेला हुँदै, स्वदेशी र विदेशी शिक्षा प्रणालीका बारेमा परामर्श दिइने
सानिमा बैंकले ल्यायो अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा